Ruka 23 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
23 Naizvozvo vose zvavo, vari vazhinji kudaro vakasimuka, vakaenda naye kuna Pirato.+ 2 Vakabva vatanga kumupomera,+ vachiti: “Takawana munhu uyu achitsausa+ rudzi rwedu, achirambidza kutera mitero+ kuna Kesari uye achiti iye ndiye Kristu mambo.”+ 3 Zvino Pirato akamubvunza mubvunzo wokuti: “Ndiwe mambo wevaJudha here?” Achipindura, iye akati kwaari: “Iwe ndiwe uri kuzvitaura.”+ 4 Pirato akabva ati kuvapristi vakuru nemapoka acho evanhu: “Handiwani mhosva pamunhu uyu.”+ 5 Asi ivo vakatanga kuomerera, vachiti: “Anonyonganisa vanhu nokudzidzisa muJudhiya mose, achitotangira kuGarireya kusvika kuno.” 6 Paakanzwa izvozvo, Pirato akabvunza kana munhu wacho akanga ari muGarireya, 7 uye, pashure pokunge awana kuti akanga ari wenharaunda yaitongwa naHerodhi,+ akamutumira kuna Herodhi, uyowo akanga ari muJerusarema mazuva aya. 8 Herodhi paakaona Jesu akafara kwazvo, nokuti kwenguva refu akanga ave achida kumuona+ nokuti akanga anzwa+ nezvake, uye akanga achitarisira kumuona achiita chiratidzo chakati. 9 Zvino akatanga kumubvunza mibvunzo mizhinji kwazvo; asi iye haana kumupindura.+ 10 Zvisinei, vapristi vakuru nevanyori vakaramba vachisimuka, vachimupomera zvakasimba.+ 11 Herodhi pamwe chete nevarwi vake vaiva varindi vakabva vamuzvidza,+ uye akamuseka+ achimupfekedza nguo refu inopenya, akamudzorera kuna Pirato. 12 Pazuva iroro chairo Herodhi naPirato+ vakabva vava shamwari; nokuti izvi zvisati zvaitika vaimbovengana. 13 Pirato akabva aunganidza vapristi vakuru nevatongi nevanhu, 14 akati kwavari: “Mauya nomurume uyu kwandiri muchiti munhu anoita kuti vanhu vamukire, tarirai! ini ndamuongorora pamberi penyu asi pamunhu uyu handina kuwana+ chikonzero chezvamuri kumupomera. 15 Chokwadi, kunyange naHerodhi haanawo, nokuti amudzosa kwatiri; uye tarirai! hapana chaakaita chakakodzera rufu.+ 16 Naizvozvo ndichamuranga+ ndomusunungura.” 17 —— 18 Asi vanhu vacho vose vari vazhinji kudaro vakashevedzera, vachiti: “Uyu mubvisei,+ asi tisunungurirei Bharabhasi!”+ 19 (Murume akanga akandwa mujeri nokuda kwokumukira kwakanga kuchiitika muguta uye nokuda kwokuponda.) 20 Pirato akashevedzerazve kwavari, nokuti akanga achida kusunungura Jesu.+ 21 Ivo vakabva vatanga kushevedzera, vachiti: “Murovererei! Murovererei!”+ 22 Kechitatu akati kwavari: “Nemhosva yei, munhu uyu akatadzei? Hapana chandawana maari chakakodzera rufu; naizvozvo ndichamuranga ndomusunungura.”+ 23 Vakabva vatanga kusimbisa nemanzwi makuru, vachirayira kuti arovererwe; uye manzwi avo akatanga kukunda.+ 24 Naizvozvo Pirato akatonga kuti chikumbiro chavo chiitwe:+ 25 akasunungura+ murume akanga akandwa mujeri nokuda kwokumukira nokuponda uye wavakanga vachida, asi akavapa Jesu sezvavaida.+ 26 Zvino pavaienda naye, vakabata Simoni, mumwe munhu wokuKurini, achibva kumaruwa, vakamutakurisa danda rokutambudzikira kuti aritakure ari shure kwaJesu.+ 27 Asi akanga achiteverwa nevanhu vazhinjizhinji nevakadzi vairamba vachizvirova nemhaka yeshungu vachimuchema. 28 Jesu akatendeukira kuvakadzi vacho, akati: “Vanasikana veJerusarema, regai kundichema. Asi, zvichemei imi nevana venyu;+ 29 nokuti, tarirai! mazuva ari kuuya ayo vanhu vachati, ‘Vanofara vakadzi vasingabereki, uye zvibereko zvisina kubereka nemazamu asina kuyamwisa!’+ 30 Vachabva vatanga kuti kumakomo, ‘Tiwirei!’ uye kuzvikomo, ‘Tifukidzei!’+ 31 Nokuti kana vachiita zvinhu izvi muti uchiri munyoro, chii chichaitika kana waoma?”+ 32 Asi vamwe varume vaviri, vanhu vaiita zvakaipa, vakanga vachiendeswawo kuti vanourayiwa pamwe chete naye.+ 33 Pavakasvika panzvimbo inonzi Dehenya,+ vakamuroverera ipapo pamwe chete nevanhu vacho vaiita zvakaipa, mumwe kurudyi rwake uye mumwe kuruboshwe rwake.+ 34 [[Asi Jesu akanga achiti: “Baba, vakanganwirei,+ nokuti havazivi zvavari kuita.”]] Uyezve, vakakanda mijenya kuti vagovane nguo dzake.+ 35 Vanhu vakamira vachitarira.+ Asi vatongi vakanga vachimuseka, vachiti: “Akaponesa vamwe; ngaazviponese,+ kana uyu ari iye Kristu waMwari, Akasarudzwa.”+ 36 Kunyange varwi vakamuseka,+ vachiuya pedyo vachimupa waini yakashapa,+ 37 vachiti: “Kana uri mambo wevaJudha, zviponese.” 38 Pamusoro pake paivawo nechikwangwani chaiva nemashoko akanyorwa, aiti: “Uyu ndiye mambo wevaJudha.”+ 39 Asi mumwe wevanhu vaiita zvakaipa akanga akaturikwa akatanga kumutuka+ achiti: “Hausi iwe Kristu here? Zviponese iwe nesuwo.” 40 Achipindura, mumwe wacho akamutsiura, akati: “Haumbotyi Mwari here, zvino zvawava pakutongwa kwakafanana?+ 41 Chokwadi, isu zvakatikodzera, nokuti tiri kugamuchira zvakakwana zvakatikodzera nokuda kwezvinhu zvatakaita; asi murume uyu hapana chaakaita chisina kukodzera.”+ 42 Zvino akati: “Jesu, mundiyeukewo kana mapinda muumambo hwenyu.”+ 43 Iye akati kwaari: “Chokwadi ndinokuudza nhasi, Uchava neni+ muParadhiso.”+ 44 Zvino yakanga yava inenge awa yechitanhatu, asi rima rakavapo pamusoro penyika yose kusvikira paawa yechipfumbamwe,+ 45 nokuti chiedza chezuva chakadzima; keteni+ renzvimbo tsvene rakabva rabvaruka nepakati.+ 46 Jesu akashevedzera nenzwi guru, akati: “Baba, ndinoisa simba rangu roupenyu mumaoko enyu.”+ Paakanga ataura izvi, akafa.+ 47 Nokuti akanga aona zvakanga zvaitika, mukuru weuto akatanga kukudza Mwari, achiti: “Chokwadi murume uyu anga akarurama.”+ 48 Zvino mapoka ose evanhu akanga aungana nokuda kwechishamiso ichi, paakaona zvinhu zvakanga zvaitika, akatanga kudzokera, achirova zvipfuva zvawo. 49 Zvakare, vose vaya vaimuziva vakanga vamire kure zvishoma.+ Uyewo vakadzi, vaya vakanga vamutevera vari pamwe chete kubva kuGarireya, vakanga vakamira vachiona zvinhu izvi.+ 50 Uye tarira! mumwe murume ainzi Josefa, akanga ari nhengo yeDare, murume akanga akanaka uye akarurama+— 51 murume uyu akanga asina kutsigirana nokurangana kwavo uye nokuita kwavo+—aibva kuArimatiya, guta revaJudhiya, uye akanga akamirira umambo hwaMwari;+ 52 murume uyu akaenda kuna Pirato, akakumbira mutumbi waJesu.+ 53 Akauburutsa,+ akauputira nomucheka werineni yakanaka kwazvo, akamuradzika muguva+ rakanga rakacherwa padombo, makanga musati mamboradzikwa munhu.+ 54 Zvino rakanga riri zuva roKugadzirira,+ uye chiedza chemanheru chesabata+ chakanga chava kuswedera. 55 Asi vakadzi, vakanga vabva naye kuGarireya, vakatevera, vakatarira guva+ racho uye kuti muviri wake wakanga waradzikwa sei;+ 56 uye vakadzokera kunogadzirira zvinonhuhwirira nemafuta anonhuhwirira.+ Asi, chokwadi, vakazorora pasabata+ maererano nomurayiro wacho.